Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages/my - Meta
Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages/my
This page isatranslated version of the page Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages and the translation is 38% complete.
ဝီကီပီဒီးယား စတင်တည်ထောင်သူ ဂျင်မီဝေးလ်
Wikipedia is non-profit, but it's the #5 website in the world, serving 450 million people every month. To protect our independence, we'll never run ads.
Google နှင့် Yahoo တွင် ဝန်ထမ်း နှင့် ဆာဗာများ ထောင်ကျော်စီ ရှိကြသည်။ ကျတော်တို့မှာ ဆာဗာ ၈၀၀ ခန့်နှင့် ဝန်ထမ်း ၁၅၀ ခန့်သာရှိသည်။
If everyone reading this donated $5, we would only have to fundraise one dayayear. Please donate to keep Wikipedia free.
Google မှာ ဆာဗာပေါင်း သန်းချီနီးပါး ရှိနိုင်သည်။ Yahoo တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၂၀၀၀ လောက် ရှိသည်။ ကျတော်တို့တွင် ဆာဗာ ၈၀၀ ခန့်နှင့် ဝန်ထမ်း ၁၅၀ သာ ရှိသည်။
ဝီကီပီးဒီးယား သည် အမြတ်မရှာသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ၅ ခုမြောက် ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ လစဉ် သုံးစွဲသူ သန်း၄၅၀ ရှိပြီး ကျတော်တို့တွင်လည်း အခြား ထိပ်တန်းဆိုဒ်များ ကဲ့သို့ ငှားရမ်းခများ၊ ထိန်းသိမ်းစရိတ်များ ရှိပါသည်။
ဝီကီပီးဒီးယား တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားနိုင်ရန် ကျတော်တို့သည် ကြော်ငြာများကို မထည့်သွင်းပါ။ ထို့အတူ အစိုးရများဆီမှလည်း ထောက်ပံ့ငွေ မယူပါ။ သင်တို့ဆီမှ အလှူခံခြင်း ဖြင့်သာ ရပ်တည်၍ ၅ ဒေါ်လာ သည် အများဆုံး လှူလေ့ရှိကြပြီး၊ ပျမ်းမျှမှာ ဒေါ်လာ ၃၀ ဖြစ်သည်။
သင့် အချက်အလက်များကို အခြားသူများသို့ ရောင်းစားခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းများ မပြုလုပ်ပါ။ အကျယ်တဝင့်သိချင်လျှင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ အလှူရှင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်း <http://wikimediafoundation.org/wiki/Donor_policy/en> ကို ဖတ်ပါ။
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Fundraising_2012/Translation/Landing_Page_and_Banner_messages/my&oldid=22151752"